June ဇွန်လသည် ဖခင်များနေ့ဖြစ်သည်။ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံသူများကို ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးသည်။
ဇွန်လ၁၉ရက်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ဖခင်များနေ့ဖြစ်သည်။ မိခင်များနေ့တော့ ရှိနေပြီး၊ ဖခင်များနေ့မရှိသေးသဖြင့် အမျိုးသမီးငယ်တဦး Sonora Smart Dodd ဆိုသူက 1910 တွင် စတင် စည်ရုံးလှို့ဆော်သူခဲ့သည်။ သူမ၏မြို့ငယ် Spokane, Washington အသင်းတော်တွင်စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ၁၀နှစ်ကြာအောင်
Read more: June ဇွန်လသည် ဖခင်များနေ့ဖြစ်သည်။...
By Jesus အကောင်းမြတ်ဆုံးစွဲလမ်းမှု... Rev. David Lah at Myitkyina
စာတန်နိုင်ငံကျဆုံးပြီး၊ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတည်ထောင်ရန်။ ဘုရားသခင်က ဆုံးရှုံးသွားသောအရာများကို ၇ဆ ပြန်ပေးနိုင်သောဘုရားဖြစ်တယ်။ ဘေးက မိတ်ဆွေကိုပြောပါ .. ဘုရားသခင်က ဆုံးရှုံးသွားသောအရာများကို ၇ဆ ပြန်ပေးနိုင်သောဘုရားဖြစ်တယ်။
Read more: By Jesus အကောင်းမြတ်ဆုံးစွဲလမ်းမှု... Rev. David...
အသက်တာတွင်းအပျော်ဆုံးအချိန်ကို ပြန်ကြည့်သော် ခလေးဘ၀သည် အပျော်ဆုံးဖြစ်၏။ အပူအပင်မရှိ အချိန်တန်ကစား၊ အချိန်တန်စားဖြင့် အသက်တာတွင် အခက်အခဲမရှိသဖြင့် အပျော်ဆုံးသော အချိန်ကာလ တခုဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်ရလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းပျော်ရွှင်မှုနေရာများတွင် အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများဝင် ရောက် နေရာယူလာပါတော့သည်။
Read more: အသက်တာတွင်အခက်အခဲရှိနေရသောအကြောင်းအရင်း
မြန်မာလူငယ်များညီလာခံ 3-May-2013 (3rd Day) GMYC Chaing Mai, Thailand ဆရာစံတိုး
ဘုရားစကားနားထောင်ခြင်း နှင့် ဆုံးမခြင်းအဆင့်ဆင့်
ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ချင်တဲ့အခါ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် မစပါ။ ရှင်းရှင်းနားလည်ရန်ကျေးဇူးပြုတော်မူပါ။ သခင်ယေရှု၏နာမတော်ဖြင့် ဆုတောင်းပါသည်ဘုရား။ အာမင်
Read more: မြန်မာလူငယ်များညီလာခံ 3-May-2013 (3rd Day) GMYC...
သခင့်၏မျက်နှာကိုထောက်လျှက်..(နော်ဘူဘောဆုတောင်းတောင်) ဆိုး၊ ညစဉ်ခွန်အား
သံတောင်မြို့ကိုရောက်လျှင် ထင်ရှားသောအမှတ်အသားတစ်ခုကတော့ နော်ဘူဘော ဆုတောင်းတောင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်အများ သွား၍ ဆုတောင်းချင်သောနေရာဖြစ်၍ ဆုတောင်းပြည်သည်ဟု နာမည်ကြီးပါ၏။ မြင့်မားသော တောင်အထွဏ်ပေါ်မှာ ကြီးမားလှသော သံလက်ဝါးကပ်တိုက်ကို တည်ထောင်ထား၍ နောဧ၏ သင်္ဘောပုံသဏ္ဍန် ဆုတောင်းရန်ဗိမာန်တော်
( အာလဖ နှင့် သြမေဃ)
ကျွန်ုပ်တို့ ကိုးကွယ် သော ယေရှု သခင် သည် အာလဖ နှင့် သြမေဃ ဆိုသည့် ခမ်းနား ထည်ဝါ လွန်းသည့် ဘွဲ့နာမ ဂုဏ်ထူးအား လူသားများ သိရှိရန် သမ္မာ ကျမ်းစာ၏ နောက်ဆုံးကျမ်း (ဗျာဒိတ်) တွင် ဖော်ပြ ခဲ့ပါသည်။ ထိုဘွဲ့ထူး သည် သခင် ဤလောက ကမ္ဘာသို့
Read more: ခရစ်တော်၏ရုပ်ပုံလွှာများ (မင်းအောင်သက်လွင်)
မင်္ဂလာတရားတော်၊ ရန်ငြိမ်းစေခြင်း၊ စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းနှင့်စိတ်နှလုံးဖြူစင်ခြင်း
သူတပါးချင်း ခိုက်ရန်ပြုခြင်းကို ငြိမ်းစေတတ်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည်ဘုရား သခင်၏ သားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို ခံရကြလတံ့။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့် နှောင့်ရှက်ညှင်းဆဲခြင်းကို ခံရသောသူ တို့သည်မင်္ဂလာ ရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်
Read more: မင်္ဂလာတရားတော်၊ ရန်ငြိမ်းစေခြင်း၊...
Part I , Part II တို့တွင် ၄ချက်ကို ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအဆုံးသပ်ပိုင်း Part III ဖြစ်ပါသည်။
ပဉ္စမအချက်-သခင်ယေရှုအဖော်မဲ့ခြင်းအကြောင်း (Loneliness of Jesus) ပြောလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ရှင်၏ အဖော်မဲ့ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် အဖော်မဲ့သူ၊ အစွန့်ပစ်ခံရသူတို့ကို အချိန်များစွာ
Read more: အဖေါ်မဲ့ခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်း (Loneliness) -...
ဦးကျော်ဝင်း၏ "အောင်မြင်ခြင်းသော့ချက်" သက်သေခံချက် (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D)
ဆရာဦးကျော်ဝင်းသည် ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသောမြန်မာလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင် ၁၉၉၀နောက်ပိုင်း လူတိုင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာဘဏ်စာရင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေ US$ dollar a/c ဖွင့်နိုင်သော ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိကဘဏ် (မေဖလားဝါးဘဏ်) ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တွင် ATM ပထမဆုံးစတင်ခဲ့ပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ဘဏ်ခွဲပေါင်း
Read more: ဦးကျော်ဝင်း၏ "အောင်မြင်ခြင်းသော့ချက်"...
သြဇိမင်းဘုရားကိုမြင်သကဲ့သို့ တကယ်မြင်ရန်၊ (မိမိ၏ စင်ကာပူမှာသာတဲ့လကဲ့သို့ ဘ၀သက်သေခံချက်) - Rev Augustus 17-Feb-2012
ကျမ်းချက်။ ဟေရှာယ အခန်း၆း၁-၈
သြဇိမင်းကြီးကွယ်လွန်မှ ဟေရှာယ (ပရောဖက်ကြီး) ထာဝရဘုရားကိုမြင်ခြင်း။
Rev Saw Augustus (Sermon at MCA Bangkok, 17-Feb-2013)
စင်ကာပူတွင် ညဖက် ကားပေါ်စီးရင်း အပြင်ဖက်သို့ ငေးကြည်မိရာ လမင်းကြီး
Read more: သြဇိမင်းဘုရားကိုမြင်သကဲ့သို့ တကယ်မြင်ရန်၊ (မိမိ၏...
ဘုရားထံအပ်နှံဆပ်ကပ်သူ "သိုးများအကြောင်း" ဆရာဒေဗစ်လား - စင်ကာပူယုဒသန်အသင်းတော် Sunday Sermon 10-Feb-2013
ကျမ်းပိုဒ်၂ပိုဒ် - ကိုဂမ်ဆိုင်းဖတ်သွားပါတယ်။ ၁ကော ၄း ၁၇-၁၈ ကမ္ဘာဦး ၄း၂၅-၂၆
ခရစ်တော်ရဲ့ ဘာသာတရားထဲပဲ နေသူများဟာ ...စာတန်ကို အရှုံပေးရတတ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်နဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်သူ၊ ခရစ်တော်ယေရှုကို သိုးသငယ်လေးလို နာခံ၊လိုက်လျှောက်သူဟာ စာတန်ရဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကို ခရစ်တော်အားဖြင့် အနိုင်ရပါတယ်။
Read more: ဘုရားထံအပ်နှံဆပ်ကပ်သူ "သိုးများအကြောင်း"...
ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံခြင်း - Rev စောသြဂတ်စတပ်
“ထာဝရဘုရား၏ ကရုဏာတော်မူကား၊ ကြောက်ရွံ့သော သူတို့အပေါ်သို့ ကာလအစဉ်အဆက် သက်ရောက်တက်၏။ သစ္စာတော်ကို စောင့်၍ ပညတ်တော်တို့ကို ကျင့်ခြင်းငှာ ၊ သတိပြုသော သူတို့၏ သားစဉ် မြေးဆက်တို့သည် ကုသလတရားတော်နှင့် ဆိုင်ရကြ၏။” ဆာ ၁၀၃း၁၇-၁၈
Read more: ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံခြင်း - Rev စောသြဂတ်စတပ်